I-villa emangalisayo ehlanganisiwe enechibi elikhulu langasese - I-Airbnb
I-villa emangalisayo ehlanganisiwe enechibi elikhulu langasese
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Jo
I-villa enhle enamagumbi okulala amathathu namagumbi okugeza amabili, indawo yokubhukuda yangasese kanye nesakhiwo esikhulu esinokubukwa okumangalisayo. Ukuhamba ibanga ukuya edolobheni eliseduze, indawo yokupaka eningi kanye negalaji. Ihlomele ngokuphelele abahambi, enamathawula namashidi nakho konke okudingayo ukuze uthole iholide elihle.
Le yindlu yangasese enendawo yokulala abantu abangu-6 ngokunethezeka, enendawo eningi yangaphandle nendawo yokupaka. Amakhilomitha angu-2 kuphela ukuya edolobheni, kanye nedamu elikhulu lokujabulela izinsuku ezinelanga lapha e-Almeria.
Kunezindawo zokudlela eziningi, izindawo zokudlela zama-tapas nezindawo zokudlela e-Albox nasezindaweni ezizungezile kanye nezitolo. Ulwandle luqhele ngemizuzu engama-30 futhi kunezinye izinto eziningi ezikhangayo phakathi nezwe.
Sikumizuzu emi-5 nje uma uhamba ngemoto futhi sihlala sitholakala ngocingo noma ngomlayezo uma unezinkinga.